मेरुदण्डको शल्यक्रिया गर्न सफल बन्यो प्रतिष्ठान – Mahilajagaran
मेरुदण्डको शल्यक्रिया गर्न सफल बन्यो प्रतिष्ठान
दिलमाया शाही । ५ असार २०७८, शनिबार मा प्रकाशित
जुम्ला ः कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्ला पहिलो पटक घाँटीको मेरुदण्डको सफल शल्यक्रिया भएको छ। तिला गाउँपालिका ७ घोडिसम गाउँका लोकबहादुर रोकायाको भर्याङबाट खसेर घाँटीको मेरुदण्ड भाँचिएको थियो । उनको पहिलो मेरुदण्डको शल्यक्रिया सफल भएको हो ।हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. पुजनकुमार रोकायाको नेतृत्वमा डा.अर्जुन तिवारी, निराजन महासेट र डा. रमेश भट्टाइको टोलीले घाँटीको मेरुदण्डको सफल शल्यक्रिया गरेका हुन ।
बिरामी रोकायाका कुरुवा खुमिलाल रोकायाले भने,‘अस्पताल ल्याउने बेला दायाँ हात र दायाँ खुट्टा चल्थेन। उनले राम्रोसित बोल्न सक्थेन। छोरा बाँच्दैन जस्तो लागेको थियो। परिवारले आशा मारिसकेका थियौँ। तर कर्णाली अस्पतालका डाक्टरहरुले छोरा बचाइदिए । मेरो परिवारका लागि चिकित्सक नै भगवान भएको बताए । उनले भने,‘कर्णाली अस्पताल नल्याइदिएको भए छोरा मर्न पनि सक्थ्यो। यात जीवनभर अपांग भएर बस्नु परेको हुन्थ्यो।’ जेठ ३ गते अस्पताल भर्ना भएका लोकबहादुर अहिले हिँड्डुल गर्छन्।
लोकबहादुरले भने,‘कर्णाली अस्पताल नआएको भए जीवन बर्बाद हुने थियो। चिकित्सकको अथक मेहनतका कारण आफ्नो जीवन बाँचेको भन्दै निकै खुसी भए।’ लोकबहादुरले भर्याङबाट खसेपछि गाउँको मेडिकलमा तीन दिन उपचार गराएका थिए। हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. रोकायाले जुम्ला अस्पतालको लागि निकै जटिल र ठूलो शल्यक्रिया भएको बताए । उनले भने,‘कर्णाली अस्पतालमा घाँटीको मेरुदण्डको अप्रेशन भएको थिएन। यो पहिलो हो। निकै जटिल शल्यक्रिया गरेर बिरामी निको भएका छन्। हामी यसैमा खुसी छौँ।’
कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण लकडाउनको समय थियो। बिरामीलाई एमआरआई गर्नुपर्ने थियो। एमआरआई कर्णाली अस्पतालमा छैन। ‘बिरामीलाई बाहिरको अस्पतालसम्म पुग्न पनि कठिन हुने भयो। निकै ठूलो चुनौतिको सामना गरेर बिरामीको अप्रेशन गरियो,’ उनले भने,‘ निकै ठूलो चुनौतिको सामना गरेर गरिएको यो अप्रेशनले नागरिकबीचमा सकारात्मक सन्देश फैलाउँनेछ।’ बर्षाले सडक अवरुद्ध हुँदा बिरामी ल्याउन लैजान समेत सकस थियो। लकडाउनको बीचमा हाडजोर्नीका ३८ अप्रेशन भएका छन्। जसमा २७ जना जुम्लाको र ११ कालिकोटका छन्। डा. रोकायाले भने,‘यो अप्रेशनमा नर्सिङ, आइसियु, एनस्थेसिया र रेडियोलोजी विभागले साथ दिएका थिए।
कर्णाली प्रतिष्ठानका प्रवक्ता भट्टराइले कर्णाली प्रतिष्ठानमा निकै महत्वपूर्ण शल्यक्रिया भएको बताए। उनले भने,‘यो शल्यक्रियाका बारेमा जनतासम्म सन्देश लैजान जरुरी छ। जतिसुकै जटिल शल्यक्रिया पनि जुम्लामा संभव छ।’ पहिले कर्णालीबाट सामान्य बिरामी पनि रेफर गर्नु पर्ने अवस्था थियो। अहिले जटिल प्रकारको अप्रेशन गरेर सुगमका बिरामी कर्णालीमा उपचार गर्न आउँछन्।